Tiigso – wax lala yaabo
wax lala yaabo	»
XAYAWAANKII UGU CIMRIGA DHEERAA INTA LA OGYAHAY
Tiigso.com July 28, 2015 0
Intee aadanuhu ka ogaan karaa, waxa u Alle uumay? Waxaa hoos ku lifaaqan warbixin cusub oo la yaab leh, taasoo ku saabsan cimri dheerida xayawaanka ama noolaha ad sawirkiisa halkaan ku aragtid. Xayawaankaasi wuxuu
SOOMAALI IYO FAHAN DOWLADNIMO?
Tiigso.com July 24, 2015 0
– QABIIL, QABYAALAD IYO KU DANAYSI DAN-GUUD Dhammaan dadka Soomaaliyeed waa ogyihiin, waana isku raacsan yihiin, in wax qaldan hihiin. Laakiin, iskuma wada raacsana meesha wax ka qaldan yihiin, sababta wax u qaldan yihiin
XAYAWAAN BADDA KU NOOL OO LABKU AMA NINKU QAADO UURKA
Tiigso.com July 23, 2015 0
Sida ay warbixinta hoos ku lifaaqani sheegayso, waxaa jira noocyo xayawaanka/noole ah oo u midka labka ahi qaado uurka uuna isagu dhalo ilmaha. Noocyadaas waxaa ka mid ah, kan hadda meesha kaaga muuqda. Waa
CAARO 12 INDHOOD LEH
Tiigso.com July 21, 2015 0
– AADANUHU INTEE KA OGAAN KARAA WAXA U ALLE BUURAY? Qormadaan hoose waxaan ka soo xiganney “National Geographic News”, luqada Ingiriiska ayeyna ku qoran tahay.Qoraalku waa dheer yahay, wuxuuna wax badan ka sheegayaa caarada.
DAYACA AY KU SUGAN TAHAY LUQADA SOOMAALIGU
Tiigso.com July 19, 2015 0
Ummaduhu waxay leeyihiin luqado, dhaqammo iyo taariikho kala duwan. Qaar way ilaaliyaan luqadooda, dhaqankooda iyo taariikhdooda, kuwana ma ilaaliyaan. Haddaad u kala fiirsatid, kuwii ilaashaday woxoodu waa bulshooyin adag oo gaarey horumar, midnimo iyo
DALKA AUSTRALIA OO AY CAARO SIDII ROOBKII UGU DA’DEY
Tiigso.com May 26, 2015 0
Roob meel ku da’a waa la arki jirey, laakiin caaro sidii roobkii u da,aysa oo inta tiro ka qabto daboolaysa carro dhanlama arki jirin. Sida u wariey joornaalka Sydney Morning Herald oo ka soo
WAR-WAA-WAREEY – Nigeria belaayaa ka dhacday!
Tiigso.com May 20, 2015 0
Hotel Nageria ku yaal oo hilibka dadka ka ganacsado oo la xiray. War naxdin argagax leh ayay dhowaan soo warisey idaacada BBC-qaybteeda Af-Sawaaxilgu. Waxaa la sheegayaa in hotel 5 star ah oo ka furraa
KALLUUN DHALIN KARA KORONTO XOOG BADAN!
Tiigso.com February 11, 2015 0
Waxaa jira kalluun mas u eg oo dhaliya ama leh koronto xoog badan oo gaareysa ilaa 600 watt. Magacyo kala duwan ayaa adduunka looga yaqaan kalluunkaas, waxaana ka mid ah ”eel” oo lagu yiraahdo